Ukuphupha Abantu Abafileyo: Izizathu zokuba kutheni kwaye zithetha ntoni - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Isizathu sokuba siphupha ngabantu abafileyo kwaye kuthetha ntoni kuthi
Ukuphupha ngomntu ofileyo kuneentsingiselo ezi-5 ezibalulekileyo. Ezi ziporho zakudala zivela ebusuku ukusilumkisa okanye ukusithuthuzela. Fumanisa imiyalezo efihliweyo apha.
Ukuba usandula ukufumanisa ukuba uphupha abantu abaswelekileyo, akukho sidingo sakuxhalaba kuba ayisiyiyo into exela ukufa kwakho okusondeleyo. Ngapha koko, la mava athathwa njengemifanekiso engumfuziselo yenguqu yezinto ezithile kubomi bephupha. Ewe kunjalo, xa sikwimeko enzima, ezi ziporho zihlala zivela kuthi, ukanti iinjongo zazo ayikokusoyikisa, endaweni yoko bafuna ukusithuthuzela okanye ukusizisela izisombululo esizifunayo. Kukho iintsingiselo ezininzi ngokuxhomekeke kubuni bomfi obonakala kuthi xa silele. USusan Taylor utyhila ukutolika kwakhe.
Sonke sizamile ukuwaqonda amaphupha ethu kunye nemiyalezo efihliweyo kuwo ngaxa lithile okanye kwelinye. Sonke sifuna ukwazi ukuba kutheni abantu abathile bevela kuthi xa silele, ngakumbi siqaphela umntu ongasekhoyo ... Olu tyelelo lwasebusuku lubonakala luyinyani kwaye luyaphazamisa ngakumbi ngenxa yalo. Kodwa ungakhathazeki, akukho nto ikruqulayo yokufunda, ngokuchasene noko!
Oko kuthetha ukuba uphupha abantu abafileyo- Kukho amathuba ama-5
1. Ufuna inkxaso nentuthuzelo
Ukuba uphupha ngomntu oswelekileyo, kusenokwenzeka oko Y okwangoku ukwimeko enzima, kwaye iziporho zexesha elidlulileyo zikuthathile oku. Oku kuthetha ukuba uyamazi umkhuseli wakho ojonge ngaphezulu kuwe ngexesha lokulala kwakho.
Ukuba umzobo uthetha nawe, kodwa awuthethi nto, umkhuseli wakho ufuna ukukuxwayisa ngengozi ngekhe uve ungezi. Ukuba iphupha likwimo yencoko yababini, yithathe njengedosi enkulu yenkxaso kunye nentuthuzelo. Njengokuba wayeyingelosi yakho ekugadayo, * umntu wakho omthandayo ufuna ukukukhokela.
* Usenokuba uqaphele ukuba umntu ophupha ngaye akasenazo iimpawu ezifanayo nezo babesaphila, kodwa ngoku uyinxalenye yelizwe lokomoya kwaye ngale ndlela unokusondela kwingelosi yakho ekugcinayo.
> Fumanisa ukuba ngaba abantu abafileyo banako ukuthumela imiyalezo emaphupheni <
2. Unezinto omele uzilungise kwaye uzigqibe
Ugqirha we-neuropsychiatrist odumileyo uSigmund Freud, owayenesiphiwo sokufumana intsingiselo yamaphupha, wajonga kulo mbandela kwaye wabonisa ukuba ukujongana nomntu ongasekhoyo kwiimpawu zakho zokulala kunesidingo sokulungisa amanqaku. Yonke into ethethwayo okanye enamava yile inxulumene nesidingo sokuvala ubudlelwane. Njengokuba ubunemvakalelo yokungapheleli, uthando, umsindo okanye imfihlo engenakubonakaliswa ngaphambili.
3. Kufuneka ubonwabele ubomi
Ngokutsho kwengcali yezengqondo uGeorge Roomey, ukubona umntu oswelekileyo kubonisa ikhonkco elicacileyo phakathi kwala mazwe mabini; Abaphilayo nabafileyo. Ewe isiporho sikhona ukukukhumbuza ukuba uyaphila kwaye uphilile, kwaye kufuneka usebenzise loo nto.
4. Lixesha lokuba uqhubeke
Ayisiyiyo leyo ixesha lokuqhawula ubudlelwane kunye naloo mntu okanye ukulibala ... kodwa kuya kufuneka ukrwele umgca phantsi kwento abayithethayo kuwe, kwinqanaba lokungazi. Umzekelo, ukuba uphupha ukuphulukana nomama wakho esaphila kakhulu, oko kuthetha ukuba unqumle intambo kwaye uphelise zonke iindlela zokuxhomekeka. Njengokuba ubuphawula ukuqala kwexesha elitsha, ixesha apho ukhululekile kwaye uzimele.
Omnye umzekelo, ukuba uphupha ukuba umntwana (nokuba ungubani) uyafa, oko kuthetha ukuba lixesha lokuba uthathe uxanduva. Umntwana apha umele ukungakhathali okanye ukungakhuli ekufuneka uxelele ukuze uye phambili!
5. Utshintsho sele luza kwenzeka ebomini bakho
Ukuba ayisosiporho osiphuphayo, kodwa a intlekele ebangela ukufa kwabantu abaninzi, utshintsho olukhulu lwenzeka kwindawo okuyo. Eyakho imikhwa inokuphazamiseka, nokuba usemsebenzini okanye kubomi bakho. Lo mbono ke ngoko uyakumema ukuba uzilungiselele ngokwasemphefumlweni ukuze kungabikho nto iya kufana nakudala ... Kwaye ayizukuba yinto embi!
Ngaba kunokwenzeka ukuba uve amazwi abafileyo?
Intsingiselo yokuphupha malunga ne-ex yakho
Intsingiselo yamaphupha ekati
Ukuthwasa kwenyanga kuMhlaza ngoJulayi 10: Lungiselela uHlaziyo lwangaphakathi
yintoni umqondiso we-zodiac
ukuvumisa ngeenkwenkwezi imihla ngemihla
fumanisa inombolo yokubhula
i-virgo sagittarius uthando ukuhambelana
indichaphazela njani i-mercury retrograde
Cacao eluhlaza vs cocoa
12 12 elithetha ukubala